PSA matoor ogsijiin - Shiinaha Hangzhou Poly Air Qalabka Kala
Mabda 'shaqo matoor cadaadis PSA lulid oxygen adsorption mashiinka adsorption qaadashada oxygen lulid Cadaadiska macmalay by Kala Hangzhou Poly Air Qalabka Warshadaha Co., Ltd qaadaa shaandho kelli zeolite sida adsorbent, ISTICMAALKA mabda'a adsorption cadaadiyay iyo desorption depressurization si uu u nuugo oo ka sii daayo oxygen hawada, si ay u kala soocaan qalabka si toos ah ogsijiin. Zeolite waa nuugta goobaabin walxaha la micropores on dusha iyo insid ...
Mabda 'shaqaynta ee PSA lulid cadaadis matoor oxygen adsorption
Mashiinka adsorption qaadashada oxygen lulid cadaadiska saaray by Kala Hangzhou Poly Air Qalabka Warshadaha Co., Ltd qaadaa shaandho kelli zeolite sida adsorbent, ISTICMAALKA mabda'a adsorption cadaadiyay iyo desorption depressurization si uu u nuugo oo ka sii daayo hawada oxygen, si ay u kala soocaan automatic ah qalabka of ogsijiin. Zeolite waa nuugta goobaabin walxaha la micropores on dusha iyo gudaha, taas oo ah cad. sifooyinka pore ay awood si loo gaaro kala ogeed of ogsijiin iyo nitrogen. separation of ogsijiin iyo nitrogen by zeolites ku salaysan yahay farqiga u yar ee dhexroor ogeed oo ka mid ah laba gaasaska. taagoo nitrogen leeyihiin heerka dhakhso sida- ee micropores of zeolites, halka taagoo oxygen leeyihiin heerka sida- gaabis ah. sida- The oo biyo ah iyo carbon dioxide hawada tilmaantay Tifaftirayaasha ma aha wax badan ka duwan in of nitrogen. Iyo waxa aad aakhirka la ka column adsorption waa u taagoo oxygen. Cadaadiska adsorption lulid iyo wax soo saarka oxygen isticmaalaan dabeecadda adsorption xushay ee shaandho kelli zeolite, iyo isticmaali wareegga wareegga cadaadis adsorption, decompression iyo desorption ah, si ay hawada tilmaantay Tifaftirayaasha galo munaaraddii adsorption ah sidoo kale in ay ogaadaan-soociddiisa hawada, sidaas saara khayroon daahirnimo sare oxygen wax soo saarka si joogto ah. Mashiinka PSA qaadashada oxygen ansixiyeen zeolite tayo sare leh sida adsorbent in ay soo saaraan oxygen ka hawo cadaadis gaar ah sida ay mabda'a isbedelka cadaadiska adsorption. Ka dib markii daahiriyey iyo qalajinta hawada tilmaantay Tifaftirayaasha BBC, adsorption la fuliyay in absorber ee adsorption cadaadis, decompression iyo desorption. Sababo la xiriira saamaynta aerodynamic, heerka sida- ee nitrogen ee micropores zeolite waa ka sii badan in of ogsijiin. Nitrogen waxaa door nuugo shaandho kelli zeolite. Ogsijiin waa hodan wajiga gaaska si ay u sameeyaan oxygen dhammaadeen. Ka dib markii decompression cadaadiska Hawada, nitrogen desorption adsorbent iyo nijaasta kale adsorbed si loo gaaro dib u soo noolaynta. Guud ahaan, labada munaaradaha adsorption loo diyaariyay in nidaamka, mid munaaraddii waxaa loo isticmaalaa in adsorb saarka oxygen, iyo ilaa munaaraddii kor kale waxaa desorbed iyo cusboonaadeen. The furitaanka iyo xidhitaanka ee waalka pneumatic gacanta barnaamijka PLC xakamaysada ah, taas oo ka dhigaysa ah wareegga laba munaaradaha sidoo kale in ay ogaadaan ujeedada saarka joogtada ah ee ogsijiin oo tayo sare leh. Nidaamka oo dhan ka kooban yahay qaybaha soo socda: Tifaftirayaasha module saabsanaa isdaahirinta, hawada, taangi lagu kaydiyo hawada, ogsijiin iyo qalabka-soociddiisa nitrogen, taangiga kayd oxygen.
2. sifooyinka Technical cadaadis PSA lulid matoor oxygen adsorption
1. hawada tilmaantay Tifaftirayaasha ku qalabeysan yahay qalab daaweyn qalajiyo oo daahirinta hawada, taas oo nadiifin kartaa iyo hawada qalalan, taas oo sahla nolosha adeegga mudada dheer ee finjilka kelli
2. waalka cusub stop pneumatic la ansaxiyey la furitaanka degdeg ah iyo xawaaraha xidhitaanka, baxsiga lahayn iyo cimri dheer bedesheen, taas oo ku kulmi karaan isticmaalka badan ee habka adsorption lulid cadaadis iyo isku halaynta sare
3. design habka Perfect iyo xulashada finjilka cusub kelli
4. edaab qaybta cusub ee wax soo saarka oxygen, si joogto ah ay tayadoodii design aaladda, yareeyo isticmaalka tamarta iyo maalgelinta raasamaalka
5. Qaab-dhismeedka qalabka Compact waxaa loogu talagalay si loo yareeyo dhulka qolku
Qalabka uu leeyahay qaab xasiloon oo ay ansixiyeen gacanta PLC si loo gaaro hawlgalka automatic heerka failure sanadlaha hooseeyo
adsorption lulid matoor oxygen-socodka nidaamka cadaadis PSA
1. qaybood oo daahirinta hawada tilmaantay Tifaftirayaasha BBC
hawada tilmaantay Tifaftirayaasha bixiya kombaresarada hawada waxaa marka hore laga rido module saabsanaa isdaahirinta hawada tilmaantay Tifaftirayaasha BBC. hawada tilmaantay Tifaftirayaasha BBC waxaa marka hore laga saaray inta badan saliida, biyaha iyo ciidda by filter biibiile, ka dibna biyo dheeraad ah saaro iyo saliid iyo boodh by qalajiyaha debcinta ka, ka dibna sii daahiriyeen by filter ka super-ganaax ku xiga isdaahirinta qoto dheer. Sida laga soo xigtay xaaladda nidaamka shaqada ee, shirkadda Rui Chen si gaar ah loogu set oo ah Tifaftirayaasha Faydi saliid hawada, taas oo loo isticmaalayo si looga hortago in ay suurtogal tahay lays saliid raad iyo siiyo badbaado ku filan shaandheeyo kelli. The miira hawada si fiican loo qorsheeyay ay hubisaa in nolosha shaandheeyo kelli waxtar leh. Hawo nadiif loola dhaqmo by qayb this waxaa loo isticmaali karaa hawada qalab.
2. taangi lagu kaydiyo Air
shaqo ee taangiga kaydinta hawada waa in la yareeyo pulsation hawada iyo ficil sida kayd. Sidaas, is beddel cadaadis nidaamka waa la dhimi karaa, iyo hawada tilmaantay Tifaftirayaasha BBC la habsami leh iyada oo loo marayo module saabsanaa isdaahirinta hawada tilmaantay Tifaftirayaasha gudbin karaa, si ay u si buuxda u soo saarto nijaasta saliida iyo biyaha iyo in la yareeyo load ee Oxygen ee PSA xiga iyo nitrogen qalab-soociddiisa. Isla mar ahaantaana, marka munaaraddii adsorption la wareegeen in ay ka shaqeeyaan, waxaa kale oo ay bixisaa qalabka oxygen PSA iyo nitrogen-soociddiisa oo la xaddi weyn oo hawada tilmaantay Tifaftirayaasha looga baahan yahay boost cadaadis deg deg ah muddo gaaban gudaheed, taas oo ka dhigaysa cadaadiska gudaha adsorption ah kaca munaarad in cadaadiska shaqada si deg deg ah oo ay hubisaa in howlgalka lagu kalsoonaan karo oo xasiloon qalabka.
3. qalab ogsijiin iyo kala nitrogen
Waxaa jira A iyo B adsorption munaaradaha la finjilka kelli gaar ah. Marka hawada tilmaantay Tifaftirayaasha nadiif galo dhamaadka tubada ku jiray munaaraddii A iyo qubanayo in outlet ah loo soo afjaro marayo shaandheeyo kelli, N2 nuugo waxa by, iyo oxygen sheyga ka dhamaadka outlet munaaraddii adsorption ah ku qubanayo baxay. Ka dib markii muddo A of time, shaandheeyo kelli in munaarad A waxaa adsorbed iyo cokan. Wakhtigan, munaaraddii A istaago adsorption si toos ah, iyo hawada tilmaantay Tifaftirayaasha qulqula munaaraddii B for nuugista nitrogen iyo jiilka oxygen, iyo shaandheeyo kelli ku jiray munaaraddii A waxaa soo cusboonaadeen. Cusboonaysiinta of finjilka kelli waxaa lagu gaarayaa by si degdeg ah yaraynta column adsorption in ay cadaadiska Hawada si loo soo saaro nitrogen adsorbed ah. Labada munaaradaha ayaa israac adsorbed iyo cusboonaadeen in ogsijiin gaar ah oo nitrogen iyo oxygen si joogto ah wax soo saarka. habka kor ku yaal waxaa ay gacanta ku PLC. Marka qiimaha oxygen daahirnimada ayaa lagu wadaa dhamaadka outlet ah, barnaamijka PLC ka furi doonaa waalka iyo si toos ah dalool oxygen aan tababar si loo hubiyo in ogsijiin aan u qalmayn aanu uma ay soo qulquli in dhibic gaaska. Isticmaal aammusiiye si uu u sameeyo qayladii ka yar 75dBA marka gaaska waa faaruq.
taangiga kayd 4. ogsijiin
taangiga kayd oxygen waxaa loo isticmaalaa in lagu dheelli ah cadaadis iyo daahirsanaanta oxygen nidaamka nitrogen iyo kala oxygen ka soo soocay si loo hubiyo in sahayda oxygen waa mid deggan. Isla mar ahaantaana, ka dib markii wareegto ka shaqeeya munaaraddii adsorption ah, waxaa recharges qayb ka mid ah ay gaaska dib u munaaraddii adsorption ah, oo gacanta ku hal, waxay ka caawisaa munaaraddii adsorption ah si kor loogu qaado cadaadiska, iyo dhinaca kale, waxa ay sidoo kale u ciyaara ee doorka ilaalinta lakabka sariirta, ciyaaro kaaliyaha habka door aad u muhiim ah in geeddi-socodka shaqada ee qalabka
jirrabo Technical cadaadis PSA lulid matoor oxygen adsorption
dhalidda Oksijiin: 5-200nm3 / h oxygen daahirnimo 90% -93%
Ogsijiin cadaadis: 0.2-0.3 dhibcood dharab MPA: - 40 ℃ (cadaadis)
beerta Codsiga cadaadis PSA lulid matoor oxygen adsorption
steelmaking Eaf: decarburization, oxygen - caawisay kululaynta sari, slag xumbo, gacanta qodniinka- iyo ka dib - xigxiga kululaynta. Qashinka biyo daaweynta: oxygen - tuulista ku hodanaynta daaalo firfircoonaan, taangiga oxygen iyo jeermiska Allena. Glass barafku: oxygen - caawiye ka sari - caawiye ka kala diridda, goynta, wax soo saarka galaas, nolosha foornada la dheereeyey. bleaching saxarka iyo warqad, chlorine bleaching waa diinta oxygen bleaching hodan, bixinta oxygen raqiis ah iyo daaweynta wasakhda. dikhaw biraha Non-ferrous: dikhaw bir, zinc, nickel, hogaanka iyo oxygen kale loo baahan yahay taajir, habka PSA waxaa si tartiib ah uu bedelay habka cryogenic. Ogsijiin, waayo, kiimikada iyo kiimikada warshadaha: reaction oxygen ee batroolka iyo warshadaha kiimikada ISTICMAALKA oxygen ku hodanaynta halkii hawada reaction qayilo, oo sii hagaajin karo xawaaraha cadaanyo iyo wax soo saarka alaabta kiimikada. daaweynta Ore: isticmaalaa sida dahabka ah habka wax soo saarka, kuwaas oo loo hagaajin karo heerka fiirsato of biraha qaali ah. Akvakultur: tuulista oxygen-hodan kordhin kartaa oksijiinka u kala diri ee biyaha iyo aad bay u weynaan dhalidda ee kalluunka. Waxaa siin karaa oksijiin kalluun nool iyo kalluunka sirdoonka culus. Halsano: oxygen - hodan halkii hawada si ay u bixiyaan oxygen for halsano laylinta, taas oo si weyn u marin kara tayada biyaha la cabo.
Previous: qalabka saabsanaa isdaahirinta, hydrogenation ZNH-
Next: VPSA ogsijiin Vacuum matoor
Cuntada Nitrogendoksid Generator Machine
Karti Sare Generator ogsijiin
Industrial Psa ogsijiin Generator
Psa Industrial Plant Generator ogsijiin
Isticmaalka Energy Low Nitrogendoksid Generator
Xuub Nitrogendoksid Generator
Generator ogsijiin Mobile
Generator ogsijiin Waayo Fish balli
Generator ogsijiin Waayo, Room
Ogsijiin Portable Generator
Ogsijiin Psa Generator dhululubada ah Buuxinta Plant
Ogsijiin Psa ogsijiin Generator Plant Gas
Small Nitrogendoksid Generator
ZBO ogsijiin matoor